Izenzo zosiko zesiZulu
Ingxenye ebalulekile yokuphila kwamaZulu
Umculo, ingoma nokudansa ngokuvamile kudlala indima ebalulekile ekuphileni kwamaZulu, hhayi kuphela komuntu, kodwa nomphakathi wonke. Ukudansa bekulokhu kubalulekile ekugcineni umqondo wokubambisana, ikakhulukazi ngezikhathi zokucindezeleka, injabulo kanye nokushintsha, isibonelo, ngaphambi kwempi, emishadweni kanye nayo yonke imikhosi ebalulekile yokuguqula ukufaka esiteji esisha noma eqenjini (ngokuvamile elidala -set).
Izitsha zomculo azizange zisetshenziswe emidlalweni eminingi yendabuko yaseZulu, futhi kwakungeyona idramu, evamile kwezinye amaqembu. Ngempela, isigubhu kuphela esaziwa esikoleni sokuqala sakwaZulu sasiyi-Ngungu, noma i-pot-drum, eyenziwa ngokususa isiqephu sembuzi yesikhumba emlonyeni wommbila omkhulu webumba (imbiza) futhi wadlala ngokuthinta ngesandla.
Kusukela emarekhodi atholakalayo, bekuzovela ukuthi isiguli, noma isigubhu sezinkuni, esivamile phakathi kwalabaZulu namuhla sasikopishwa, mhlawumbe esivela kumakhelwane abo aseTonga.
IZulu inezinsimbi eziningi ezinama-string lapho uGubu, umnsalo ophethe izintambo ene-calabash ehlangene ekugcineni, wayeyaziwa kakhulu. Ukudansa bekulokhu kunenani elihle kakhulu emphakathini weZulu, kanti kunezikhathi eziningi zokuphila kweZulu uma ziyingxenye ebalulekile yenqubo yokugubha imicimbi ebalulekile.
Isibonelo, lapho umfana noma intombazane ifinyelela ebusheni, izingoma ezithile zihlabelelwa, zihambisana nokudansa okuningi. Okufanayo kusebenza emshadweni, lapho ukuphikisana okwenziwe khona phakathi kwala maqembu amabili kuboniswa ngumncintiswano omkhulu wokudansa owenza ingxenye ebalulekile yonke imicimbi yomshado.
Ikakhulukazi esikhathini esidlule, lapho ukuzingela kwakusavamile, ukudansa nakho kwakunenani lemfundo ngaphambi kokuzingelwa. Ngaphambi kokuphuma, amadoda aqoqwa izinkomo lapho edansa khona, aziqhayisa ngobuqili bawo nalokho ayezokwenza nokuthi bezoba nesibindi kanjani ekuzingeleni.
Ngale ndlela, intshiseko yokuzingela yayishukumiseleka futhi izilindelo ziphakeme. Okumangalisayo nokugxila kunoma yikuphi ukudansa kweZulu kwakungokwemibuso yenkosi ngokugqoka ngokugcwele ngaphambi kokulwa kanye nasemidlalweni yaminyaka yonke esigodlweni senkosi ngemuva nje kweMkhosi Wezithelo Zokuqala.
Imizila yokudansa yamasosha yayinamandla futhi inamandla, eqondile ngesikhathi nokuma futhi ihlelwa kahle. Umphumela walokhu, kuhlanganiswe nezembatho zabo ezisezingeni eliphakeme, kwakumangalisa ngempela.